Kathmandu24 || 24*7 News In Nepali Language » जानी जानी कार्टुनमा बच्चा फालेको खुलासा, शिशिर भन्छन् : अब असली पिडित को हुन भनेर सहयोग गर्नु ?
जानी जानी कार्टुनमा बच्चा फालेको खुलासा, शिशिर भन्छन् : अब असली पिडित को हुन भनेर सहयोग गर्नु ?
काठमाडौं, साउन २० । जब मानिस पैसाको लोभमा फस्छ तब उसले सारा मूल्य र बन्धनलाई तोड्छ भन्ने हालैको एक घटनाले फेरि पुष्टि गरेको छ ।
नौं-नौं महिना कोखमा राखेर जन्म दिने आमाले नै आफ्नी शिशुलाई झाडीमा लगेर फाल्छिन् भन्ने त अझ कल्पना बाहिरको विषय ।
तर यही साउन १२ गते एउटी निर्दयी आमाले पैसा कमाउने लोभमा त्यसै गरेको तथ्य खुलेको छ ।घटना यही साउन १२ गते सोमबारको दिनको हो । काठमाडौंको कपनमा कागजको कार्टुनमा शिशु फालिएको समाचारले सनसनी बनेर फैलियो ।
शिशुलाई सहयोग गर्ने र सहयोगीहरुको माध्यम बन्नेहरु धेरै थिए, खासगरी भाग्य न्यौपाने, शिशिर भण्डारीले शिशुको लागि देश तथा विदेशबाट सहयोग जुटाएका थिए । तर अहिले आएर यो सबै घटना फेक भएको पुष्ठि भैसकेको छ । बालगृह कि सन्चालिका पुस्पा अधिकारी र उक्त शिशुकी आमा मिलेर घटना घटाएको तथ्य खुलिसके छ ।
शिशिर संगै रबि लामिछानेकि श्रीमती निकिता पौडेल समेत उक्त शिशुलाई सहयोग लिएर बालगृह पुगेकी थिईन । यो घटनाको कर्तुत बाहिर आइसकेपछी भन्डारीले चित्त दुखेर साह्रै रुन मन लागेको छ भन्दै फेसबुकमा उनले अन्तर्वार्ता लिएको भिडियो क्लिप राख्दै अब खै को चाहिँ असली पिडित हुन् भनेर सहयोग गर्नु ? भनेर प्रश्न गरेका छन् ।
हेरौं शिशिर भण्डारीको स्टाटस जस्ताको तस्तै –
चित्त दुखेर साह्रै रुन मन लागेको छ तलका केहि कुरा पढेर भिडियो हेरेर सक्दो शेयर गरिदिनुहोला
पहिलो पटक त्यहाँ पुग्दा ‘केयर बाल गृह’ सँस्थाकी संचालिका पुष्पा अधिकारीलाई मैले ‘यो घटना फेक होईन नि’ भनेर सोधेको पनि थिएँ, र उहाँले हैन ढुक्क भएर सहयोग गर्नुस भन्नु भएको थियो तर आज यस्तो उदेकलाग्दो कुरा सुन्दा साह्रै चित्त दुखिरहेको छ । आफु पनि दुई छोराको बाबु भएका कारण, बिशेष बच्चाहरुको दुख भन्ने बित्तिकै म सहयोग गर्न पुगिहाल्छु, अब यस्तो भ्रम छरेको हो भने हामी सहयोगीलाई नै फसाउने काम गरिन्छ भने खै को चाहिँ असली पिडित हुन् भनेर सहयोग गर्नु ? मनोबल गिरेर, चित्त दुखेर साह्रै रुन मन लागेको छ । हामीबाट गल्ती भएको भए माफी पाऊँ, हामी कसरी अगाडि बढ्ने सल्लाह, सुझाव दिनुहोला है !